Everchọtụla ịmalite blọgụ nke gị? Ma ọ bụ, već nweela blog ị na-ejighi n’aka etu ị ga-esi ruo ọkwa nke ọzọ?
1 Još 1. bloga o Scratchu
1.1 1. Họrọ ezigbo web domaćin na aha ngalaba
1.2 2. Gosiputa nglalaba DNS n’ebe onye web gị nọ
1.3 3. Wụnye WordPress na web-hostingu
3.5 5. Ajụjụ platforma Q&
4.5 Društveni mediji, Ahịa & SEO
Ezubere M Bochum Nzuzo Wepụta (WHSR) na 2008, na ekele akụkụ nke nnabata nnabata ịde blọgụ anyị ji ike gaa ike. Kemgbe ahụ, WHSR etolitela ghọrọ otu n’ime saịtị ndị isi na Net maka ndụmọdụ ntanetị, ma adọtala m ka ha mata ụfọdụ olu siri ike na ịde blọgụ nke oge a – ha niile azụk nịimeị n nimeị n nime nị n n n nime , na-eme ọ bụ ihe a ga-eji nweta onye ọ bụla nke na-ebido ịga ebe ịde blọgụ nke onwe.
Site na ntuziaka enweghị nzuzu a, m ga – ewetara gị ụfọdụ ngwa ngwa, nghọta dị mfe nghọta na karịa ụzọ dị mma maka nsogbu ịde blọgụ gị – sitere na ahụmịhe nke m na n’ụụ nụụ ha na na na na.
Moja ode akwụkwọ profaịlụ na Problogger.net – M na-ebipụta oge niile na ọtụtụ saịtị ndu blogger dị elu n’etiti 2015 – 2018.
Još 1. bloga o Scratchu
Akụrụngwa ịde blọgụ kachasị ewu ewu, WordPress.org, bụ n’efu. Amakacha amara emepe emepe WordPress na dodacima bụ n’efu. Ma enwere ọtụtụ nde nkuzi n’efu na-amalit gị (gụnyere nke a). Naanị ihe ị ga – eri bụ ịmalite blọọgụ bụ ego ị na – akwụ maka onye webụsaịtị na aha ngalaba.
Họrọ ezigbo web domaćin na aha ngalaba
Wụnye WordPress na web host gị ọhụụ (dfe mfe iji ihe nrụnye akpaaka).
Ma … nke ahụ niile.
Easyda mfe? Kladite se nzọ!
1. Họrọ ezigbo web domaćin na aha ngalaba
Iji bido blog gbara onwe gị,-ga-ebu ụzọ chọọ ngalaba aha na akaụntụ nnabata web.
Vi nwere ike ịhọrọ ma denye aha ngalaba gị site na ngalaba na-edeba aha. GoDaddy, AhaCheap, Hover, na Domain.com bụ ụfọdụ n’ime ndị na – edebanye aha ndị ama ama na ahịa.
Ubrzati – needchọrọ onye nnabata nke na – ebu ngwa ngwa n’ihi na ọsọ na-emetụta ahụmịhe onye ọrụ na ogo ọchụchọ.
Ime ụlọ na-eto – hoće ga – achọ nkwalite ndị ọbịa (atụmatụ ndị ọzọ, ikike sava ndị ọzọ, wdg) ka blọọgụ gị na – eto.
nkwado – Ondatanetị na-agbanwe agbanwe mgbe niile, ma dị mma mgbe niile ịnwe onye nyere gị nkwado n’akụkụ ọrụaka.
Nlekọta blọọgụ abụọ na InMotion Bochum maka 3,99 USD mjesečno.
Alele bụ otu n’ime web host web dị ọnụ ala karịa, ọkachasị n’oge nnabata afọ ezumike nka. N’agbanyeghị ịbụ ụlọ ọrụ Bochum mmefu ego, Hostinger na-enye ọtụtụ atụmatụ atụmatụ Bochum dị mma maka ndị na-ede blọgụ.
SiteGround na-akwụ ụgwọ 3,95 dolara / blog maka otu blog.
2. Gosiputa nglalaba DNS n’ebe onye web gị nọ
Ọzọ, ịkwesịrị imalaite ndekọ DNS na ngalaba aha na-edeba aha (ebe ị debanyere aha ngalaba gị na nzọụkwụ # 1) na-arụtụ aka na sava weebụ gị (InMotion Hosting, Hostinger ma ọ bụ SiteGround).
DNS guzoro na ngalaba Aha Sistem ma na-eji ya eduzi onye ọrụ ọ bụla na-abata kwupụta adreesị IP nke sava ahụ. Yabụ, mgbe onye ọrụ batara “WebHostingSecretRevealed.net” ihe ndekọ DNS ga-ebugote adreesị IP nke onye web m ma jeere onye ọrụ m saịtị ahụ.
Ihe Nlereanya: Itinye aka na web-lokaciji na InMotion Hostingerer-u na GoDaddy.
Nke a bụ ntuziaka usoro maka iji melite blog blog gị na GoDaddy ili Namecheap.
3. Wụnye WordPress na web-hostingu
Iji malite ọde blọgụ site na iji WordPress ị ga-ebu ụzọ wụnye sustavụ ahụ n’ime onye na-elekọta weebụ gị. Enwere ike iji nke a mee nke a, ma ọ bụ iji ngwa nwụnye otu ngwa-ngwa. Methodszọ abụọ a dị mfe nfe ma enwere ike ịme ya ngwa ngwa.
Više podataka o WordPressu nije bilo na vašem jeziku, već je MySQL na vašem MySQL-u, ali nije ni riječ o nama..
Mepee wp-config.php na edede edede (bilježnica) ma jupụta nkọwa data nchekwa data gị.
Više informacija o WordPressu na web lokaciji wp-admin / install.php i na nch ngharị weebụ gị. Ọ bụrụ na ụ wụnye WordPress na ndekọ ndekọ,-ga-aga: http://example.com/wp-admin/install.php; Ako imate WordPress na vašem blogu, možete pročitati blog, pročitajte više: http://example.com/blog/wp-admin/install.php
Ako ne zaboravite na anaghị etinye aka WordPress ha.
Site na nkwado nke ọrụ ntinye ọpịpị dịka Softaculous na Mojo Market Place (be dabere na nke web host ị na-eji), usoro nrụnye dị ezi n’iru ma enwere ike ịme ya na ole na ole dị mfe.
Maka ntụaka gị, ihe onyonyo ndị a na-egosi ebe we nwere ike ịchọta njikwa nwụnye akpaaka gị nadzorna ploča. Iji wụnye WordPress, a nije bilo pedera akara ngosi gbara gburugburu ma soro ntuziaka akaebe zuru oke – sustavụ WordPress gị kwesịrị ịdị na-arụ ọrụ na erughị nkeji ise.
Ihe Nlereanya: može li se pronaći iWunye WordPress na elekọta weebụ gị naanị ole na iji iji Hostinger Auto Installer (gaa na Hostinger ebe a).
Ihe nwere ike ịdị iche maka ndị web na-ahụ maka weebụ mana usoro a bụ otu. Ja puka nwutela ma o buru na i jighi otu ndi agha a m na e gosi n’ebe a.
Sve nam je na WordPressu omogućeno da se novorođenčad jednostavno promijeni. Ako imate više stranica na Wuru Na, dobit ćete 95% od ukupnog broja Sjedinjenih Država na WordPressu. N’ụwa niile, ọ fọrọ nke nde Nde blọọgụ 27 na-agba na WordPress.
Ozugbo itinyela sustavụ WordPress je, URL adresa je postavljena i sadrži se i WordPress. N’ọtụtụ oge, URL ahụ ga – abụ ihe dị ka nke a (be dabere to folda ị wụnyere na WordPress):
Gaa URL a wee banye aha njirimara na paswọọdụ gị site n’bebe ahụ, ị ​​ga-anọ ugbua na njedebe (nadzorna ploča) nke saịtị WordPress gị – nke a bụ akụkụ nke blog ebe naanị gị dịka onye nchịkwa nwere ike.
WordPressdị WordPress kačas ọhụrụ n’oge engede bụ ụdị 5.3.2 – na ndabara ka ị ga-eji WordPress Gutenberg dị ka onye edemede eldere. Gutenberg na-eweta mgbanwe dị ukwuu na nyiwe WordPress. Nke a bara uru maka ndị mbido ebe ọ bụ na ọtụtụ ihe dị ka ịtọlite ​​ụla n’azụ na ihe ndị ọzọ anaghị achọ ụkọ. Usoro ngọngọ na-enyere aka na njikwa okirikiri edede.
Iji dee ma bipụta ọkwá ọhụrụ, gọọgharịa gaa n’akụkụ aka ekpe, p’a ‘Posts’> ‘Tinye Nkọwa’ na ị ga-eduzi na ngere endede. Pịa ‘Preview’ ka ị hụcha ihe ihe dị na njedebe (ihe ndị na-agụ gị ga-ahụ), pịa ‘Bipụta’ ozugbo oge zuru ezu.
Hola! Sada bipụtara akwụkwọ blog mbụ gị.
Nke a bbe ebe ị nwere ike ịnweta isiokwu WordPress n’efu. Uputi edepụtara na akwụkwọ ndekọ a na-agbaso ụkpụrụ siri ike nke ndị mmepe WordPress nyere, ya samo, n’echiche m, nke a bụ ebe kachasị mma iji nweta atụmatụ isiokwu adịghị mma.
Zọ ọzọ ị ga-esi nweta isiokwu dị elu nke a na-akwụ ụgwọ bụ yedenye aha na Clubs Club WordPress.
Ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ ị nụrụ banyere klọb Okwu egwuregwu, lee ka o si arụ ọrụ: Ti na-akwụ ego ole iji sonyere klọb ahụ, ị ​​na-enwetakwa atụmatụ dị iche iche enyere. A na-ahazi usoro ngosi enyere na klọbgụ Tema.
mara Gburugburu, Studio Press, ili samo ono što je WordPress Gburugburu kl kb m nwere ike ikwu.
Mara Gburugburu Gburugburu – Karịrị 80 adịgboroja WordPress gburugburu, ea ebe a iji lee onodu okwu mbu.
Gaa na: StudioPress.com. Ahịa: 129,95 USD / isiokwu ma ọ bụ 499,95 dolara / ndụ
Bụrụ na ị bụ onye ọrụ WordPress oge, mgbe ahụ, ị ​​nụla banyere StudioPress. Napravite novi Jenesis Framework, minimalistički na SEO-enyi na WordPress-u ili na StudioPress-u gburugburu.
StudioPress na-enye ọnụahịa mgbanwe dịka mkpa gị. Okpokoro Genesis na isiokwu nwata nwere maka ugwo ugwo nke $ 59,99. Ihe kachasị mkpa, nke gụnyere Igodo Jenesis, na-efu $ 99 ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta niile gburugburu, i nwere ike ịkwụ ụgwọ $ 499.
Njikere just saịtị ndị Artisan Themes nyere.
Blog o bji na njikarịcha arụmọrụ. W3 Ukupan predmemorija na Nrụ ọrụ ọsọ ọsọ bụ nhọrọ kachasị ewu ewu.
Ihe mgbakwunye arụmọrụ abụọ ndị ọzọ ị kwesịrị ịlele Igwe ọkụ, na WP Super Cache. Cloud Flare bg ngwa mgbakwunye nke ụlọ ọrụ CDN nyere, Cloud Flare; ebe WP Super Cache mepụtara web mjesto na Donncha na Automattic, ọlọ ọrụ mepụtara ma na-arụ ọrụ WordPress ugbu a.
Ihe mgbakwunye mkpọchi bu ihe kwesiri ntaneti na ụwa ịde blọgụ ọgbara ọhụrụ – ọ na – eme ka ahụmịhe onye ọrụ dị mma site na ịbawanye arụmọrụ sava ahụ, belata os e ee ge ta ta ta ta ta.
Ako ne zaboravite, jednostavno je prilagoditi EWWW alat za optimizaciju slike. Ọ bụ otu njikarịcha ihe oyiyi na-eme ka enwee ike iwepụta ihe eserese onyonyo nke ọbá akwụkwọ gị. O nwekwara njiri aka na-egosipụta mkpirisi onyonyo iji belata ogo onyonyo mgbe ị na-ebugote ha. Site na iji eserese kachasị mma, i nwere ike belata oge ibu peeji ma rụpụta arụmọrụ saịtị ngwa ngwa.
Site na ntinye nke Gutenberg nchịkọta akụkọ na WordPress 5.0, nd-na-ede blọgụ nwere ike ịmepụta ọdịnaya ugbu a site na iji nchịkọta akụkọ na-egbochi ngọngọ. Site na ndabara, WordPress na-enye setịpụrụ ngọngọ ọdịnaya dịka paragraf, eserese, bọtịnụ ịkpọ oku na-eme, koodu mkpirisi, na ndị ọzọ. Site na ginsgbakwunye na dodacima Gutenberg, ị ga – agbakwunye ihe ndị ọzọ na – etinye aka (dịka ọmụmaatụ – FAQ, harmonika, profaịlụ edemede, vrtiljak, pịa-to-tweets, GIF blokovi, wdg) na blog gị.
Mogućnost slaganja, krajnji blokovi, na CoBlocks i dodaci na Gutenberg Block dodacima na-akwụghị ụgwọ ịnwale.
Nke a bụ nke ọhụụ dịka newbie na-amalite blọọgụ: ha ga-ede banyere ọrụ ha na Mọnde, ihe omume ntụrụndụ u utorak, fim ha lere na Wednesde, na echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ngwụsị. Na nkenke, ndị a na-ede edede na isiokwu dị iche iche n’ejighị isi okwu ọ bụla.
O siri ike inwe ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke ndị na – agụ akwụkwọ na – eguzosi ike n’ihe mgbe ị na – ede blọgụ na – akpaghị aka n’ihi na ndị mmadụ agaghị ama ma ọ bụrụ na he naki – akki ma ọ bụ akwụkwọ na – akatọ akwụkwọ. Ndị na-akpọsa ngwá ahịa ga-achọkwa ịkpọsa gị maka na ha amaghị ihe ị bụ. Iji wuo blog na-aga nke ọma, niša ịkwesịrị ịchọta.
Ọ bụ ezie na esemokwu dị ukwuu, ọ gaghị eme ka okwu gị bụrụ ebe a n’izu na-esonụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na we nwere nnọọ mmasị na Vine ma malite na blog dabere na ya, mgbe nke ahụ daa na ejiji ị ga-abụ nke ọdịnaya. Ọ ka mma ka ị lekwasị anya n’inwekwu okwu n’ozuzu, dịka "ịmepụta mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze" ma ọ bụ "ngwa ọdịyo dị egwu". N’ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na ụda daa na ejiji, blog gị ka nwere ike ịnọgide na-ele anya maka ihe ọ bụla na-agbanwe ya.
Jụọ onwe gị ma ọ bụrụ na ọ bụ isiokwu ga-adọta ndị na-agụ akwụkwọ ma mepụta ego – ma ọ bụ site na mgbasa obzirom ma ọ bụ ahịa. Ọ bụrụ na ị na – ede blọgụ iji kwado azụmahịa gị dị, blọọgụ ọ na – ebute ndị ahịa ọhụrụ? Ọ bụrụ na ị na-ede blọgụ naanị n’ihi na we nwere mmasị na isiokwu ahụ, enwere ụzọ ị ga-esi tinye blog nke gị n’otu n’otu?
M na-eji SpyFu, ngwa mgbasa o nke Pinye aka-na Pịa aka ọrụ, iji tụta uru ọghọm bara uru mgbe ụfọdụ. Echiche m n’azụ nke a – ọ bụrụ na ndị mgbasa glede na-akwụ puku kwuru puku dolar na Google Adwords, ọ ga-enwerịrị ego ị ga-eme n’ubi a. Lee ihe atụ mụọ chọtara:
Ihe Nlereanya # 1: Nke a bụ stats mgbasa ozi maka onye na-emepụta ihe eji eme egwuregwu (na-eche ụdị egwuregwu dịka Adidas ma ọ bụ Nleba Ọhụrụ mana ntakịrị). Lọ ọrụ a na-etinye ihe karịrị $ 100,000 kwa ọnwa na Adwords dị ka Spyfu.
Ihe Nlereanya # 2: Nke a bụ mgbasa ozi mgbasa tiče maka onye na-eweta ngwanrọ IT. Imate 20 i više dana, npr. Nurekwu na niši. Lọ ọrụ a, karịsịa, mgbasa o azụtara na mkpokọta 3.846 na Googleu ma jiri ihe dị ka $ 60.000 kwa ọnwa.
Eziokwu dị mwute nke ọtụtụ ndị na – ede blọgụ nọ na ya ọ wasla ọtụtụ oge iji wulite akwụkwọ ha. Dobivanje nyota puku peeji mbụ ha nwere ike su ọnwa, ụfọdụ blọọgụ ọkacha mara ọfụma na-abịabakwa ebe ahụ.
Ndị mmadụ na-eriju afọ na mmelite mgbasa o nke mgbasa o, ndepụta pogledu ọma, s obzirom na ịntanetị, na ụdị mgbasa s obzirom na ledenu ledinu. Ọ na-esikwu ike ime ka ndị mmadụ gụọ ọdịnaya gị. Agbanyeghị, ị ka nwere ike ịme nke ọma ma ọ bụrụ na ịmara onye bụ ndị na – ege gị ntị bụ na ihe ha na – achọ. Chee echiche banyere oghere dị na niche gị, ụdị ọdịnaya adịghị efu na otu ị ga – esi weta ndị na – ege gị ntị uru.
Jiri ngwaọrụ mgbasa se odnosi na elekọta mmadụ iji soro ihe na-aga nke ọma na društvenim medijima. N’ebe dị otú a, we nwere ike iwepụta echiche ọdịnaya nke na-enweta ezigbo nzaghachi site na mgbasa glede mgbasa ozi.
Jiri ngwaọrụ ịdịnaya dịka Zaa Ọha ịchọrọ maka ajụjụ ndị ama ama ndị mmadụ na-ajụ na Google.
Jiri ngwa nyocha okwu iji chọpụta isiokwu ụfọdụ ndị mmadụ na-achọ n’ime niša gị. Nwere ike iwepụta ọdịnaya dabere na isiokwu ndị ahụ.
Kwesịrị ịkekọrịta posts gị ugboro ugboro. Ọ bụrụ n’ịkpọku gị ka ị sonyere bọọdụ Pinterest nke dabara na niche gị, debanye ma kekọrịta na ịza ajụjụ ugboro ugboro. Ọ bụrụ na i sonyere na ndepụta nke ndị na-ede blọgụ nwere echiche, ọdịmma bụ na ha ga-ekerịta ihe ibe ha oge niile – kwa izu ma ọ bụ kwa ụbọchị. Nke a ga – enyere aka ọgụgụ gị na itinye aka gị.
Jiri nwayọ bira ebo gị – kwụọ ndị ọzọ nọ na ya ụgwọ ma soro ha jikọọ.
Nyere aka na mmemme Twitter. Ikwu na nzaghachi ndi otu ndi ozo. Kekọrịta eadinge na akwụkwọ akụkọ gị. Gbakọọ ma kwụghachi ụgwọ blọọgụ ị hụrụ n’anya site na ịgosipụta otu izu ma ọ bụ ọnwa.
Jụọ otú ị ga-esi nyere onye ọzọ aka ma ọ bụ site n’inye ndị ọbịa akwụkwọ ozi. Na-ere ngwaahịa ha, jiri njikọ ha mmekọ, kwalite njikọ ha na mgbasa glede gị mgbe ị na-edecha ha. Dịka ohere iji weghachite ndị na-ede blọgụ, ndị na-ede blọgụ a ga-echeta enyemaka gị ma kpọọ gị ka ị bịa.
N’elu ihe m hụtụrụla n’elu, blọọgụ gị ekwesịghị iji mmapụta na pịa pịa. Kama, bili smo gosi ndị na – agụ ya ihe ha dere. Mara nsogbu oge ndị na – agụ akwụkwọ gị wee ghọta ihe kpatara ha iji nọrọ na saịtị gị.
Kewaa blog gị na ngalaba ma ọ bụ paragraf. Mgbidi eadinge nwere ike iyi ihe na-emenye ụjọ ma na-eju ndị na-agụ ya anya.
Mgbe iwu ọzọ (ọ bụghị iwu ọla edo, ikekwe), ọ bụrụ na ị hapụ njikọ, enyela URL nke blog gị. Kama nke ahụ, jikọta post nke gị mkpa nke na-agbakwunye uru na post na mkparịta ụka mbụ. Relevantnost bụ isi ebe a.
5. Ajụjụ platforma Q&
Nzukọ na ntanetị na Q&A bụ ebe dị mma ịnweta oche n’ihu ndị na-ege gị ntị nwere mmasị, nwere mmasị. Ihe a bu n’uche nyochaa mkparịta ụka na-aga n’ihu na niši gị ka ị wee chime mgbe ị nwere ihe ga – enyere gị aka ikwu (ma ọ bụghị, ọ bụghị post ọ bụla ga – abụ ohere – mana ụfọdụ ga – eme). Ga-achọ ezigbo onye na-agụ akwụkwọ, dị ka Feedly, iji rụọ ọrụ a.
Quora, Klout, na Yahoo! Azịza – ndị a bụ ụzọ atọ kachasị mma nke ikpo okwu Q&
Mụtakwuo: Choo uzo ozo iji tinye mon blog gi wee gụpụta nke Kevin Muldoon Ọmụmụ ikpe na-ere BloggingTips.com zaradio je 60.000 dolara.
Dika onyinye nke nkpu maka iguta akwukwo m rue ebe a, aga m enye gi ndepụta nke oru efu ndi anyi ji eme ihe n’oge nile na WHSR. Enwere m obi ụtọ, m ga-achọ ka ị nwee ihe ịga nke ọma na njemu ịde blọgụ gị.
Gramatički – Kasị ewu ewu na ntanetị nnyemaaka.
Hemingway App – Napravite više informacija o oknu.
Nnwere onwe.to – Gbochie ebe nrụọrụ weebụ na-adọpụ uche ka we nwee ike lekwasị anya n’ide edede.
SiteWord – Ngwá ọrụ edede n’efu.
Fotor – Dezie ma chepụta ngwa ọmarịcha ihe osise maka mgbasa ozi mgbasa glede, akwụkwọ mmado, akwụkwọ ịkpọ oku wdg
Canva – Chepụta ọmarịcha ihe onyonyo na nke mgbasa obzirom mgbasa o.
Pik na grafikonu – Mfe okike ihe omuma ihe omuma.
Akwụkwọ Eziokwu nke Ụwa – Enweghị ochi egwu – o ụwa ozugbo sitere CIA.
Biblioteka Hubspot – Ezigbo akwụkwọ ntụaka na ahịa.
Ihe okike ide ihe – Echiche na kpaliri iji merie eadinge mgbochi.
Upozorenja Google – Sve što se tiče toga je što se događa.
Društveni mediji, Ahịa & SEO
Ngwá Ọrụ Google Webmaster – Ngwá ọrụ nyocha saịtị n’efu nke Google.
Na-aga zaljev -Azụ ahịa, ire & ngwa ọrụ akpaaka
D Explorer ka Explorer – Lelee metrik nke ọdịnaya (ma ọ bụ ndị asọmpi) gị.
Tweet Deck – Ijikwa otutu akaụntụ Twitter n’otu nadzornoj ploči.
Buzz Sumo – Chọta ọdịnaya dị egwu na ndị na – eme ihe ọfụma na netwọ mgbasa o mmekọrịta ọha
Kọlọtọ Odbor – Nnyocha ahịa ahịa mgbasa ozira.
IFTTT – Mbipụta ọdịnaya na nyiwe mgbasa u pogledu ọtụtụ mmadụ na-adị mfe.
Google Analytics – statistika web stranice.
Nchịkọta YouTube – Statistika na vidiyo YouTube gị.
WP Statistics – Tụlee blog WordPress gị na ndị ọzọ.
Nnyocha Ule – Lelee ọsọ web stranica zuru ezu.
GT Metrix – Nwalee ma soro web stranica učitava ọsọ n’ụzọ zuru ezu.
Ego ole echere ka ịmalite blọọgụ gụnyere aha ngalaba na nnabata weebụ dị n’okpuru $ 100 kwa afọ (erughị $ 10 kwa ọnwa). Ọnụ ego a dabere na blọọgụ ejiri aka gị (iji WordPress). Nkwụsị nke ụgwọ ahụ ga-abụ: $ 15 kwa afọ maka aha ngalaba .com na ihe dịka $ 60 kwa afọ maka ego nnabata web.
Iji nweta ezigbo foto maka otu esi akwụ ndị na-ede blọgụ ụgwọ, edepụtara m ha na ụdị 2 – otu bụ ebe ị na-emeso ndị ahịa ma ọ bụ ndị mgbasa ozugbo ebe nke kezọ beọonyonybebebebe bụ netwọk nyere.
Mgbe gị na ndị ahịa ma ọ bụ ndị mgbasa o na-emekọrịta ihe,-na-enwe ike ijikwa ọnụahịa ahụ. Uključite web mjesto ego ewe na:
– Izravna mgbasa ozi
– bọọdụ posao
– Došlo je do biputere postova nkwado
Pogledajte naš novi blog, ali ne i WordPress.com, već WordPress.com, Tumblr Bloger Bloger. Iji mepụta blog n’efu, ihe ị ga – eme bụ ịdebanye aha ma ị nwere ike ịmalite ibipụta ọdịnaya gị.
– Aha ngalaba nke blọọgụ gị ka ọ bụrụ poddomena d myka „myblogname.wordpress.com“ ma ọ bụ „myblogname.tumblr.com“
– Imate obere ọrụ, dodatke za nhọrọ isiokwu ị nwere ike ịme blọọgụ gị
Ana m atụ aro ka ị malite blog gị site na iji WordPress.org kwadoro onwe gị (dị ka ihe m kpuchiri na ntuziaka a). Ezazimo imma mmachi nke blog efu, mmụba nke blog gị nwere enweghị njedebe.
Aha ngalaba nke blọọgụ gị ga-abụ poddomena dị ka „myblogname.wordpress.com“ ma ọ bụ „myblogname.tumblr.com“
Enwere obere ọrụ, dodaci na nhọrọ isiokwu we nwere ike ịme na blog gị
Ụtụtụ mgbe, usoro ikpo okwu n’efu na -emechi ohere nke unovčivanje gị blog